Mashiinka goynta Fiber Laser DA 3015T
1. DA-3015T waa mashiin culus oo goynta leben-ka ah dharka sare ee loo yaqaan 'leber leer laser goynta' ee loogu talagalay lesers-ka sare ee awoodda sare ee baahiyaha dhabta ah ee warshadeynta birta. Sariirtu waxay ka samaysan tahay alwaax dhuuban alwaax qaro weyn leh, geedi socod ku-meel-gaar ah, oo buuxin kara shuruudaha xoogga goynta saxan qaro weyn oo adkeysan kara saameynta hawlgalka xawaare sare. 2. Waxay aqbashaa tuubbo bir ah oo dhumucdiisuna ay adag tahay, nidaamka birta iyo nidaamka wadista pinion, iyo nidaamka xirfadleyda ah ee loo yaqaan 'CNC system', waana ay fududahay in la shaqeeyo oo si fudud loo dayactiro. Fiican ee indhaha ...
Mashiinka goynta Fiber Laser ee Balaarinta iyo Pipe
1. DA-3015G waa mashiinno badan oo goynta laser-ka ah ee warshadeynta birta wax lagu kala iibsado waxaana la helay rukhsaddii soo saarista qaran. Waxay aqbashaa tuubbo bir ah oo dhumuc weyni leh, tuubbo iyo nidaamka wadista pinion, iyo nidaam xirfad u goynaysa CNC, waana ay fududahay in la hawlgalo oo si fudud loo dayactiro. Mashiinka goynta laser-ka fiber le Optical leh alaabada sare ee la soo dejiyey, taas oo u siisa dadka isticmaala awood goynta awood iyo hufnaan. Waa doorashada ugu fiican taarikada dhaqaalaha iyo dhuumaha ...
Mashiinka Gooynta Fiber Laser ee Miiska Isweydaarsiga Gawaarida
1. DA-3015H waa naqshad culus oo sariirta leh mashiinka goynta miraha fiber-ka ah ee miisaska lasameeyo ee loogu tala galay awooda sare ee warshadaha biraha. Sariirtu waxay ka samaysan tahay alwaax dhuuban alwaax qaro weyn leh, geedi socod ku-meel-gaar ah, oo buuxin kara shuruudaha xoogga goynta saxan qaro weyn oo adkeysan kara saameynta hawlgalka xawaare sare. 2. Mashiinka waxaa ku qalabaysan laba meelood oo shaqada la isweydaarsado. Markaad ka shaqeyneyso hal miis, qeybta kale ayaa soo dejin karta oo kala bixi karta sh ...
Mashiinka goynta Fiber Laser DA 1530N
Astaamaha: 1. DA-1530N waa mashiinka goynta laser fiirinta dhaqaalaha ee loogu talagalay baahiyaha dhabta ah ee warshadaha biraha xaashiyaha. Waxay ku qalabeysan tahay iskaashi istiraatiiji ah oo ah 500w-1500w laser power, iyo kan ugu adag wuxuu yareyn karaa 15mm carbon steel. 2. Waxay aqbashaa tuubbo bir ah oo dhumucdiisuna ay adag tahay, nidaamka birta iyo nidaamka wadista pinion, iyo nidaamka xirfadleyda ah ee loo yaqaan 'CNC system', waana ay fududahay in la shaqeeyo oo si fudud loo dayactiro. Mashiinka goynta laser-ka fiber le Optical leh alaabada sare ee la soo dhoofiyey, oo siisa adeegsadayaasha ...